Xildhibaano cusub oo Maanta ku biiray Baarlamaanka Maamulka Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaanada Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland ayaa Maanta kulankii 25-aad ee kal fadhigiisa 47-aad ku yeeshay Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal, waxaana shir guddoomiyey Guddoomiye C/rashiid Yuusuf Jibriil.
Ajendaha kulan Xildhibaanada ayaa waxaa uu ahaa dhaalinta xubinnimada 8 Xildhibaan oo cusub iyo ka doodista Hindise-Xeereedka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyaha oo horey Madaxweyne Saciid deni u gudbiyey.
Sida uu qabo Dastuurka Puntland qodobkiisa 61-aad iyo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada, waxaa Golaha Wakiillada lagu hor dheeriyey 8 Xildhibaan oo cusub kuwaas oo bedelay Xubnihii hore ee laga Xayuubiyey Xubinnimadii iyo Xasaannada.
Magacyada Xildhibaannada cusub ayaa kala ah;
1- Xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Yuusuf ( Afgaduud)
2- Xildhibaan Maxamed Cabdi Faarax
3- Xildhibaanad Maryan Cismaan Axmed Fangase
4- Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac
5- Xildhibaan Maxamed Maxamuud Saalax ( Abuu baraa)
6- Xildhibaan Cabdicasiis Xuseen Maxamuud ( Garagoos)
7- Xildhibaan Cabdiqani Nuur Faarax Muuse
8- Xildhibaan Cabdullahi Maxamed Gurey Mirood
Dhinaca kale, Xildhibaannada Golaha Wakiilada ayaa gudo galay inay qodob-qodob uga doodaan Hindise-Xeereedka Diiwaan-gelinta Cod-bixiyaha kaas oo ka kooban 36 Qodob.